अनलाइन डेटिङले यसरी फसाउँछ | सुदुरपश्चिम खबर
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : भदौ ११, २०७८ 1
अहिलेका पुस्ता फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जाल एवं विभिन्न किसिमको साइटमा उपयोगी काम मात्र गरिरहेका हुँदैनन्, नयाँ साथी खोज्ने, भावनात्मक रुपले नजिकिने, व्यक्तिगत कुराकानी आदनप्रदान गर्ने लगायत निकै जोखिमपूर्ण काम पनि गरिरहेका हुन्छन् ।
जबकी ति दुई भौतिक रुपमा कहिल्यै देखभेट गरेकै हुँदैनन् । उनीहरु भर्चुअल माध्याममा जोडिएका हुन्छन् । त्यही माध्यामबाट एकअर्काको विश्वास जित्ने प्रयास गर्छन् । त्यहाँसम्म त ठिकै छ । तर, उनीहरु त्यसभन्दा एक कदम अघि बढेर निजी कुरा साझेदार गर्न थाल्छन् । अन्ततः त्यही कुरा पछि गलपासो बन्न सक्छ ।
केही बर्षअघि एक नेपाली युवाले छद्म नाममा फेसबुक एकाउन्ट बनाएर, त्यसमा आफ्नो नक्कली रुपरंग पेश गरेर युवतीहरुलाई फसाउने, शारीरिक शोषण गर्ने, आर्थिक लाभ लिने गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । उक्त युवा पक्राउ परेपछि उनले त्यस्ता माध्याम अपनाएर कति युवतीलाई आफ्नो मोहजालमा फसाइरहेका छन् भन्ने कुराको खुलासा भएको थियो ।
त्यस्तै एक युवतीले आफु डाक्टर वा उच्च प्रहरी अधिकारीकी छोरी भएको नक्कली आवरण पेश गरी दुनियालाई ठग्दै हिँडेकी थिइन् । उनी पनि पक्राउ परिन् ।
यस्ता एकाध घटना त बाहिर आउँछ । तर, धेरैजसो घटना भित्रभित्रै गुम्सिएर रहेको हुन्छ । जब अप्रिय घटना बाहिर आउँछ, तब मात्र त्यसको मूल कारण खुल्छ ।
अहिले फेसबुक लगायत केही डेटिङ साइट छन्, जहाँ युवायुवतीहरु झ्याम्मिएका हुन्छन् । भर्चुअल माध्यामबाट उनीहरु कसैसँग प्रेम गर्छन् र आफ्नो सबै गोपनियता चुहाइदिन्छन् । त्यसैलाई आधार बनाएर नियतवस् ढंगले कतिले फाइदा लिने गर्छन् ।
जबकि भर्चुअल डेटिङ कति असावधानी र खतरानक हुन्छ भन्ने कुराको अहिलेका तन्नेरीले हेक्का गरेकै हुँदैनन् । डेटिङको दुनियाँ दिनप्रतिदिन क्रुर हुँदै गइरहेको छ ।
नियोजित ढंगले डेटिङ साइटमा आउने, च्याट गर्ने र प्रेमको जालमा फसाउने कृत्य बढिरहेका छन् । उनीहरुलाई थाहा हुँदैन कि आफुमाथि भावनात्मक मोलमोलाई भइरहेको छ । उनीहरु वास्तविक सोच्छन् । दिनदिनै त्यसमै डुब्छन् । उनीहरु आफ्नो सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिका हरेक कुरा विश्वास गर्न थाल्छन् । यसरी विस्तारै–विस्तारै उनीहरु बहकिन थाल्छन् । खासगरी किशोरावस्थामा यस किसिमको भावनात्मक कमजोरी रहन्छ ।
जब उनीहरु आफ्नो सम्पर्कमा आएका पार्टनरसँग सबै कुरा साझेदार गर्छन्, हरक्षण कुराकानी गर्छन्, तब त्यस्तो क्षणबाट उनीहरु बाहिर आउन सक्दैनन् । सामान्य लयमा फर्कनका लागि उनीहरुलाई गाह्रो हुन्छ । ठीक यही मोडमा आएपछि उनीहरु चिन्ताग्रस्त हुन्छन् र गलत निर्णय पनि लिन सक्छन् ।
मनोविज्ञहरु यस्ता कृत्यप्रति सर्तक गराउँदै भन्छन्, ‘यसले भावनात्मक असुरक्षा महसुष हुन्छ । जो पीडक हुन्छन्, उनीहरु जे गर्छन् त्यो सबै नियतवस्, नियोजित ढंगले गरिरहेका हुन्छन् । उनलाई विश्वास गर्नेहरु अवोध हुन्छन् ।’ जो झुटो रुपमा आफुलाई पेश गरेर अरुलाई फसाउने चेष्टा राख्छन्, त्यसलाई एन्टिशोसल मल्टीपर्सनालिटी डिसअर्डर भनिन्छ । उनीहरु एकदमै चतुर र धूर्त हुन्छ । उनीहरु अर्काको भावनामाथि खेलबाड गरेर त्यसबाट फाइदा उठाउन माहिर हुन्छन् ।
मनोविज्ञहरुका अनुसार, अनलाइन डेटिङको जालमा धेरैजसो त्यही व्यक्ति फस्न पुग्छन्, जो डिजिटल दुनियमा भर्खरै प्रवेश गरेका हुन्छन् । जो बाहिरी दुनियासँग कम लगाव राख्छन् । जो एक्लोपनबाट छुटकारा पाउन खोजिरहेका हुन्छन् । जा भावुक हुन्छन् । यस्ता प्रवृत्तिका युवायुवती चाडै फस्न सक्छन् ।
हाम्रो आसपासमा यस्ता मानसिकताका केही मानिसहरु भेटिन्छन्, जो आफ्नो सकारात्मक गुणलाई बढाइ–चढाई अरुलाई प्रभावित गर्छन् । यस्ता व्यक्ति सजिलै पहिचान गर्न सकिन्छ ।
–संभव भएसम्म त अपरिचितसँग सम्बन्ध बनाउन नै हुँदैन । यदि सम्बन्ध बनाउने नै हो भने उसको प्रोफाइल हेर्नुपर्छ । तस्विरहरु वास्तविक हुन् वा झुटो ? नियाल्नुपर्छ । फोटोसप वा अन्य एप्लिकेसनको प्रयोगबाट नक्कली फोटो पो राखिरहेको छ कि ?
– कुराकानी गर्दा आफ्नो सबै निजी कुरा खुलाउनु हुँदैन । आफु कहाँ छु, के गर्छु, को हुँ भन्ने कुरा त्यसबेलासम्म खुलाउनु हुँदैन, जब आफ्नो सम्पर्कमा आएका साथी वास्तविक र इमान्दार हो भन्ने पक्का हुँदैन ।
–अनलाइनमै देखाइने कतिपय प्रलोभनमा विश्वास गर्नु हुँदैन । उपहार आदनप्रदान गर्ने, घुम्ने, डेटिङ जाने कुरालाई सकेसम्म अस्विकार गर्नुपर्छ । अनलाइनखबर बाट सभार